Ny fahagagana nahaterahan'i Jesosy | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
"Azonao vakiana ve izany?" Nanontany ahy ilay mpizahatany, nanondro kintana volafotsy lehibe iray izay misy soratra latinina: "Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est." "Hiezaka aho," hoy aho namaly, nanandrana handika ny fampiasana ny herin'ny Latin latina manjelanjelatra aho: "Io no naterak'i Maria Virjin'i Jesosy." "Ahoana, araka ny hevitrao?", Hoy ny fanontanian'ilay rangahy. "Mino izany ve ianao?"
Izany no fitsidihako voalohany ny Tany Masina ary nijoro tao amin'ny fiangonan'ny Fiangonan'ny fahaterahan'i Betlehema aho. Ny Church of the Nativity dia toa miorina eo ambonin'ity grotto na lava-bato ity, izay araka ny lovantsofina, dia i Jesosy Kristy dia teraka. Kintana volafotsy, izay napetraka eo amin'ny gorodona marbra, no hanamarihana ny tena toerana nitrangan'ny fahaterahan'Andriamanitra. Namaly aho hoe "Eny, mino aho fa noraisin'i Jesoa tsara [teo am-pofoan'i Maria]", saingy mbola misalasala aho raha nanamarika ny toerana nahaterahany ny kintana volafotsy. Nino ilay lehilahy, izay fombafomba iray fa azo inoana fa teraka i Jesosy ary dia ny fitantaran'ny Filazantsara momba ny fahaterahan'ny virjiny dia fikasana hanafina io tranga mahamenatra io. Ny mpanoratra ny Filazantsara dia nohazavainy, fa nindramina tamim-pahaterahana fotsiny ny foto-piterahana avy amin'ny angano taloha taloha. Taty aoriana, rehefa nandehandeha nanodidina ilay faritra feno sakelidrano izahay, teo ivelan'ny fiangonana taloha, dia noresahinay ny momba ilay lohahevitra.
Tantara nanomboka tamin'ny fahazazana
Nohazavaiko fa ny teny hoe "fiterahana virijina" dia momba ny fiheverana an'i Jesosy tany am-boalohany; izany hoe ny finoana izay noraisin'i Jesoa tao amin'i Maria tamin'ny alàlan'ny asan'ny Fanahy Masina mahatalanjona, tsy misy herin'andriana zanak'olombelona. Ny fotopampianaran'i Maria izay ray aman-dreny tokana an'i Jesosy dia ampianarina mazava ao amin'ireo andalana roa ao amin'ny Testamenta Vaovao: Matio 1,18-25 sy Lioka 1,26-38. Izy ireo dia mamaritra ny maha-tafaporofo ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy noho ny zava-misy ara-tantara. Matio milaza amintsika:
"Fa izao no nahaterahan'i Jesosy Kristy: Rehefa i Maria, reniny, izay fantatr'i Josefa, dia nahita talohan'ny nitondrany azy hody, fa bevohoka tamin'ny Fanahy Masina izy ... fa izay rehetra tonga dia efa tanteraka. izay nolazain'ny Tompo tamin'ny alàlan'ny Mpaminany, izay nilaza hoe: "Indro, hanan'anaka ny virijina ary hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Immanuel", izany hoe adika: Andriamanitra miaraka aminay » (Matio 1,18:22, 23).
Nosoratan'i Lioka ny fihetsik'i Maria momba ilay fanambarana nataon'ilay anjely momba ny fahaterahan'ilay virijiny: «Ary hoy i Maria tamin'ilay anjely: Ahoana no tokony hitranga, satria tsy mahalala olona aho? Namaly ilay anjely nanao taminy hoe: Ho tonga aminao ny Fanahy Masina, ary ny herin'ny Avo Indrindra hanaloka anao; koa ny Masina izay hateraka dia hatao hoe Zanak'Andriamanitra » (Lioka 1,34-35).
Ny mpanoratra tsirairay dia samy mitondra ny tantara. Ny Evanjelin'i Matio dia nosoratana ho an'ny mpamaky jiosy ary ny fanatanterahana ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha. I Luke, kristiana iray hafa firenena dia nanana ny tontolo grika sy romana rehefa nanoratra. Nanana mpihaino cosmopolitan bebe kokoa izy - kristiana avy amin'ny mpanompo sampy izay nipetraka tany ivelan'i Palestina.
Andeha hojerentsika indray ny fitantaran'i Matio hoe: "Ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia tahaka izao: Ary i Maria, reniny, izay efa fantatr'i Josefa, dia nahita talohan'ny nitondrany azy hody fa efa bevohoka tamin'ny Fanahy Masina izy" (Matio 1,18). Matio dia nitantara ny fomba fijerin'i Josef. Nihevitra i Josef mangingina ny fanimbana ilay resaka. Fa nisy anjely niseho tamin'i Josefa ary nanome toky azy hoe: «ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra ny hitondra an'i Maria vadinao aminao; fa izay noraisiny dia avy amin'ny Fanahy Masina » (Matio 1,20). Nanaiky ny drafitr'Andriamanitra i Joseph.
Ho fanaporofoan'ireo mpamaky jiosy azy fa i Jesosy no Mesian'izy ireo, dia nanampy toy izao i Matio: "Fa izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nolazain'ny Tompo tamin'ny alàlan'ny mpaminany izay nilaza hoe:" Indro, hanan'anaka ny virijina hiteraka zazalahy ary izy no hanome azy ny anarany hoe Emmanuel », izay midika hoe adika: Andriamanitra miaraka aminay» (Matio 1,22: 23). Io dia manondro ny Isaia 7,14.
Ny tantaran'i Maria
Miaraka amin'ny fahaizany mampiavaka ny andraikitry ny vehivavy, i Lukas dia mitantara ny tantara avy amin'ny fomba fijerin'i Maria. Hitantsika ao amin'ny fitantaran'i Lioka fa nandefa ny anjely Gabriela Andriamanitra tany Maria i Nazareta. Hoy i Gabriel taminy: «Aza matahotra ry Maria fa nahita fahasoavana ao amin'Andriamanitra ianao. Indro, hitoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy » (Lioka 1,30-31).
Ahoana no tokony hisehoany, hoy i Maria, satria mbola virjiny izy? Nanazava taminy i Gabriel fa tsy ho fahita mahazatra izany: «Ho tonga aminao ny Fanahy Masina ary ny herin'ny Avo Indrindra hanaloka anao; koa ny Masina izay hateraka dia hatao hoe Zanak'Andriamanitra » (Lioka 1,35).
Na dia azo antoka aza ny maha-bevohoka azy ary ho voaozona ny lazany, nanaiky tamim-pahasahiana i Maria ilay toe-javatra niavaka: "Jereo fa ankizivavin'ny Tompo aho," hoy izy. "Mitranga amiko izany araky ny nolazainao" (Lioka 1,38). Ny fahagagana dia niditra tao anatin'ny habaka sy fotoana ny Zanak'Andriamanitra ary lasa embryon'olombelona.
Ireo izay mino ny fahaterahan'ny virjiny dia mazàna manaiky fa tonga olombelona i Jesosy mba ho famonjena antsika. Ireo olona tsy manaiky ny fiteraky ny virijiny dia miraharaha an'i Jesosy avy any Nazareta amin'ny maha-olombelona - ary toy ny maha-olombelona anao ihany. Ny fotopampianaran'ny virijiny dia mifandray mivantana amin'ny foto-pampianarana momba ny nofo izany, na dia tsy mitovy aza izany. Fahatongavana ho nofo izy ireo (Fahatongavana ho nofo, ara-bakiteny "embodiment" ara-bakiteny) no fotopampianarana manamarina fa ny Zanak'Andriamanitra mandrakizay dia nampiana nofon'olombelona tamin'ny maha-Andriamanitra Azy ary tonga olombelona. Io finoana io dia mahita ny fiteniny mazava tsara indrindra ao anatin'ny fantsom-bokin'ny Filazantsaran'i Jaona: "Ary ny Teny dia tonga nofo ary nonina teo amintsika" (Jaona 1,14).
Ny foto-pampianarana momba ny fahaterahan'ny virjiny dia milaza fa nisy fahatsapana nitranga tamin'i Jesosy tamin'ny fomba mahagaga nefa tsy nanana ray olombelona. Ny nofo tonga nofo dia nilaza fa tonga nofo Andriamanitra; ny fahaterahan'ny virjiny dia milaza amintsika ny fomba. Ny fahatongavan-jaza dia hetsika goavambe ary nahaterahana karazana fahaterahana manokana. Raha olombelona vao hateraka ny zaza nateraka, dia tsy tokony hisy fahatsapan-javatra goavambe. Ny lehilahy voalohany, ohatra, Adama, dia natao koa tamin'ny tanan'Andriamanitra. Tsy nanana ray na reny izy. Tsy Andriamanitra anefa i Adama. Nanapa-kevitra Andriamanitra fa hiditra amin'ny zanak'olombelona amin'ny alàlan'ny fahaterahana virijiny.
Araka ny hitantsika dia mazava ny teny ao amin'ny fizarana ao amin'ny Matio sy Lioka: Virjiny i Maria rehefa noraisin'ny Fanahy Masina i Jesosy. Fahagagana avy amin'Andriamanitra izany. Saingy tamin'ny fahatongavan'ny teolojia liberaly - miaraka amin'ny ahiahy amin'ny ankapobeny ny zava-drehetra any an-tany - ireo fanontaniana ara-Baiboly ireo dia nanontany noho ny antony maro samihafa. Iray amin'ireny angamba ny niavian'ny fitantarana ny nahaterahan'i Jesosy. Ity teoria ity dia milaza fa rehefa niorina ny finoana kristiana tany am-piandohana dia nanomboka namorona singa tsy misy dikany amin'ny Kristiana ny tantaran'ny fiainan'i Jesosy. Ny fahaterahan'ny virjiny, hoy izy, dia ny fomba fisainany fotsiny no nanehoany fa fanomezan'Andriamanitra ho an'ny olombelona i Jesosy.
Ny seminera Jesosy, vondrona vondrona manam-pahaizana momba ny Baiboly liberaly izay mifidy ny tenin'i Jesosy sy ny evanjelistra dia mandray an'ity fomba fijery ity. Ireo teolojiana ireo dia mandà ny fitantaran'ny Baiboly momba ny fiheverana goavambe sy ny nahaterahan'i Jesosy amin'ny fiantsoana azy "famoronana taty aoriana". I Maria, hoy izy ireo dia tokony ho nanao firaisana tamin'i Josef na lehilahy iray hafa.
Moa ve ireo mpanoratra ny Testamenta Vaovao nifanao angano tamin'ny alàlan'ny fanaovana tsinontsinona an'i Jesosy Kristy? Mpaminany “zanak'olombelona” ve izy, "olon-tsotra amin'ny androny", izay narahin'ny mpino tsara finoana niaraka tamin'ny aura goavam-be mba "hanohana ny dogmatikan'izy ireo"?
Tsy azo tohanana ireo teoria ireo. Ny tatitra momba ny fahaterahana roa avy amin'i Matthäus sy Lukas - miaraka amin'ny atiny sy ny fomba fijeriny samy hafa - tsy miankina tsirairay. Eny tokoa, ny fahagagana amin'ny maha-tafofofo an'i Jesosy no hany marika iraisan'izy ireo. Izany dia manondro fa ny fahaterahan'ny virjiny dia miorina amin'ny fomban-drazana taloha, fantatra fa tsy amin'ny fivoaran'ny teolojika na fampandrosoana ara-pinoana.
Misy ve ny fahagagana?
Na dia eo aza ny fanekena malaky ny fiangonana tany am-boalohany, ny fahaterahan'ny virjiny dia hevitra sarotra amin'ny kolotsaina maoderina maro, na dia ho an'ny Kristiana sasany aza, ao amin'ny kolontsaintsika ankehitriny. Betsaka ny olona mihevitra fa ny fiheverana ny fiheverana mahatalanjona dia manitra ny finoanoam-poana. Izy ireo dia nilaza fa ny fahaterahan'ny virijiny dia fotopampianarana tsy misy dikany amin'ny sisin'ny Testamenta Vaovao izay tsy dia misy dikany amin'ny hafatry ny filazantsara.
Ny fandavana ny fisalasalana momba ny hery miavaka dia mifanaraka amin'ny fomba fijery tsy miangatra sy ny maha-olona. Fa ho an'ny kristiana iray, ny fanesorana ny hery miavaka indrindra taorian'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia midika fa mampandefitra ny fiandohan'Andriamanitra sy ny dikan'ny fototra. Fa maninona no mandà ny fiteraky ny virijina raha mino ny maha-Andriamanitra an'i Jesoa Kristy sy amin'ny fitsanganany amin'ny maty? Raha mamela fivoahana goavambe [fitsanganana amin'ny maty sy fiakarana] isika, maninona no fidirana an-tany tsy hita maso? Ny fananarana na ny fandavana ny virijiny dia mandroba fotopampianarana hafa momba ny lanjany sy ny dikany. Tsy manana fototra na fahefana afaka apetraka amin'izay inoanay isika Kristianina.
Nirotsaka tamin'izao tontolo izao Andriamanitra, dia niditra an-tsehatra tamin'ny raharaha maha-olombelona izy, nandresy ny lalàna voajanahary raha ilaina hahatratra ny tanjony - dia tonga nofo [olombelona] tamin'ny fahaterahan'ny virjiny. Rehefa niditra tao amin'ny nofo maha olombelona an'i Jesosy Andriamanitra, dia tsy namoy ny maha-Andriamanitra azy fa vao nampiditra ny zanak'olombelona amin'ny maha-Andriamanitra Azy. Andriamanitra sy olombelona izy (Filipiana 2,6-8; Kolosiana 1,15-20; Hebreo 1,8-9).
Ny fiandohan'i Jesosy dia miavaka amin'ny olombelona rehetra. Ny naha tsikombakomba azy dia fanaovan-javatra nomen'Andriamanitra ny lalàna momba ny natiora. Ny fahateranan'ny virjiny dia mampiseho ny halavan'ny Zanak'Andriamanitra izay vonona ny handeha ho Mpanavotra antsika. Izy io dia fanehoana mahatalanjona noho ny fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra (Jaona 3,16) nanatanteraka ny fampanantenany famonjena.
Ny Zanak'Andriamanitra dia tonga namonjy antsika tamin'ny fananganana ny toetran'ny olombelona ka nahafatesany ho antsika. Niditra tao aminny nofo izy mba hahafahan'izay mino azy azo navotana sy nampihavana sy voavonjy (1 Timoty 1,15). Andriamanitra sy olombelona ihany no afaka mandoa ny vidiny lehibe noho ny fahotan'ny olombelona.
Araka ny nanazavan'i Paoly hoe: «Fa rehefa tonga ny fotoana, Andriamanitra dia naniraka ny zanany lahy, nateraky ny vehivavy ary nametraka ny lalàn'ny lalàna hanavotra ireo teo ambanin'ny lalàna, mba hananantsika zanaka (Galatiana 4,4: 5). Ho an'izay manaiky an'i Jesosy Kristy sy mino ny anarany, Andriamanitra dia manolotra ny fanomezana sarobidy amin'ny famonjena. Manolotra fifandraisantsika manokana aminy izy. Afaka ny ho tonga zanakalahy sy zanakavavin'Andriama- nitra isika - "Zanaky ny tsy nateraky ny ra, na tsy sitrapon'ny nofo, na avy amin'ny sitrapon'olombelona, ​​fa avy amin'Andriamanitra" (Jaona 1,13).